Ahoana no nahazoako $ 28,000 tao anatin'ny 28 andro latsaka tamin'ny fampiasana an'ity app ity - Joon Online
Ny fomba nahazoako $ 28,000 tao anatin'ny 28 andro latsaka.
Ahoana no hanombohana amin'ny The Olymp Trade Sehatra.
1. Betsaka ny vola napetrako tany am-boalohany.
2. Mametraka ny tanjoko isan'andro aho.
3. Tsy tapitra ahotrade.
4. Mampiasà paikady varotra.
Hevitra farany momba ny fomba ahazoako $ 28,000 amin'ny 28 latsaka.
Tsy ny tantara fahombiazana rehetra vakianao amin'ny Internet no marina. Ary tsy ny tantaram-pahombiazana rehetra izay tena marina 100% no ekena amin'ny fo manontolo koa.
Rehefa mandeha ny lohateniko, Nahazo 28,000 $ aho miampy ao anatin'ny 28 andro latsaka.
Ary tsy mangataka aminao hino ahy aho, satria na izany na tsy izany dia tsy misy mahasamihafa azy raha tsy forte anao ny varotra, sa tsy izany?
Ny volako rahateo, marina?
Lahatsoratra bebe kokoa ho anao.
Hevitra momba ny asa.
XM - Sokafy kaonty varotra tena izy
Ampidino ny sehatra MT4 / MT5
XM Live Education - Fantaro hoe ahoana Trade.
Kaonty Islamika Forex - Misoratra anarana.
Ary na inona na inona lazainao na ataonao dia mety tsy manipy vola kely aminao aho amin'ny toe-javatra rehetra, sa tsy izany?
Ity no azoko atao, azoko atao ny mampianatra anao ny fomba nahavitako azy.
Raha ny marina, avelao aho hamerina hamerina izany. Hampianariko anao ny fomba Nahazo 28,000 $ aho ao anatin'ny 28 andro nefa tsy mitete hatsembohana.
Vonona izany, andao handeha.
Ka ny fomba fanaovako io vola io dia antsoina hoe varotra.
Ary inona no atao hoe varotra, mety hanontany ianao?
Ny varotra dia ny fividianana, fivarotana na fifanakalozana fananana fotsiny.
Rehefa olona trade, mividy fiarovana toy ny fizarana, vola, entana ary ny derivatives izy ireo.
Ny olona manao an'ity dingana ity, ny fividianana sy fivarotana fananana dia fantatra amin'ny anarana hoe tradeRs.
TradeAfaka miasa amin'ny fahafahan'ny agents, hedger, arbitrageur, na speculator ny rs.
Amin'ny ahy, Nahazo 28,000 $ aho ao anatin'ny 28 andro amin'ny maha-mpitaingina mpivady vola azy.
Te hahafantatra ny dingana narahiko ve ianao?
Alohan'ny hahatongavantsika amin'izany dingana izany dia jereo ny horonan-tsarin'ny fandanjana ny kaonty mivantana eto ambany.
Ka inona ilay Olymp Trade Platform?
Olymp Trade dia sehatra varotra an-tserasera hahazoana vola.
Eo amin'ny lampihazo dia haminany ny valin'ny fananana ianao mandritra ny fotoana voafaritra ary raha marina ny faminanianao dia mahazo hatramin'ny 90% amin'ny fampiasam-bolanao ianao.
Mahaliana fa azonao atao ny mamaritra ity vanim-potoana ity (expiration) ho 1 minitra monja.
Midika izany fa mety hahazo tombony hatramin'ny 90% isa-minitra ianao.
Hanomboka, araho ireto dingana ireto.
Register eo amin'ny lampihazo.
Fenoy ny tutorial mifandraika - ity fampianarana ity manome anao ny tongotra ho toy ny vao manomboka.
Misafidiana iray amin'ireo paikady - ity dia iray amin'ireo paikady VIP izay nampiasako tamin'ity volana ity.
Mampiasà kaonty demo - azonao atao ny mamorona ny kaonty demo eto.
Manaova petra-bola ary lasa manam-pahaizana.
Ka, ahoana no nahazoako $ 28,000 tao anatin'ny iray volana niaraka tamin'ity fampiharana ity?
"Broker" sehatra fifanakalozana varotra tsara indrindra any Libanona
Andao manorata tsipika miavaka eo anelanelan'ny Scalping sy ny varotra antoandro
Manomboha fivarotana hatsaran-tarehy miaraka amin'i Ksh. 2,000 mba hahazoana 5,000/= isan'andro amin'ny 2022
Ny tahirim-bolako voalohany dia goavambe.
Mametraka ny tanjoko isan'andro aho.
Tsy tapitra ahotrade.
Nandritra izay 1 volana lasa izay dia nampiasaiko Olymp Trade Paikady VIP ho trade.
Na dia ny petra-bola kely indrindra ao amin'ny Olymp Trade dia $ 10 fotsiny, rehefa nanomboka an'ity aho kaonty vaovao, Nanapa-kevitra ny hametraka 6,000 $ aho?
Mora be ny manontany tena, maninona no mametraka $ 6,000 nefa $ 10 fotsiny ny vola kely farany apetraka?
Avelao aho hanazava.
Na dia $ 10 fotsiny ny kely indrindra apetraka, ny fifanakalozana kaonty $ 10 dia miteraka risika lehibe indrindra amin'ny fifanakalozana FTT.
Mihevitra ny kely indrindra trade vola dia $ 1, izay izy, raha ny fanazavana, dia 10 fotsiny no ho lany trades hitsoka kaonty 10 dolara.
Raha tsy matoky ahy ianao dia andramo.
Izany dia nilaza fa raha tsy maintsy mivarotra amin'ny kaonty tena izy ianao, manandrama mametraka $ 100 farafaharatsiny ho an'ny kaontinao voalohany.
Raha te hanana tongotra matanjaka kokoa eny an-tsena, $ 500 dia ampy.
Na izany aza, nianatra ihany koa aho tamin'ny fanandramana fampindramam-bola 6,000 $ fa ny fametrahana $ 5,000 dia tsy ny renivohitra tsara indrindra hanombohana varotra, fa mamokatra fihenam-bidy tsara indrindra sy antonony amin'ny olana ara-barotra androany.
Ahoana no tiako holazaina?
Ny tiako holazaina dia miaraka amin'ny tahiry goavambe, mora be ny manalefaka ireo loza mety hitranga, trade amin'ny sandam-bola mety, ary mitomboa mitombo ny kaontinao.
Ity ambany ity ny pikantsary amin'ny petra-bolako voalohany natao tamin'ny 18 martsa 2021 tamin'ny 16:22:04.
Na dia mora aza ny manao $ 100, $ 500, na $ 5,000 na ny $ XNUMX fotsiny aza; ny zavatra lehibe tokony hatao aorian'ny fanaovana petra-bola dia ny tsy manomboka varotra eo noho eo fa ny fametrahana tanjona kendrena.
Manontania tena hoe, ohatrinona ianao no te-hiharan-doza amin'ny tokan-tena trade ao amin'io kaonty io? Ary, miaraka amin'ny fananana amin'izao fotoana izao izay hatakalonao, moa ve ny mety hitrangan'ny renivohitra amin'ny fampodiana vola?
Avereno jerena ihany koa ireo tabilao momba ireo fananana izay mahaliana anao ny varotra mialoha.
Manampy izany raha toa ianao ka manao fandalinana na fanandramana ifotony na / na ara-teknika alohan'ny hanapahana hevitra momba ny paikady mety.
Mbola zava-dehibe kokoa aza, diniho ny fomba teo aloha trades dia nivadika toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny tabilao.
Raha toa ka milamina ny zava-drehetra dia apetraho ny tanjonao.
Manapaha hevitra hoe ohatrinona no tadiavinao karama trade na amin'ny ankapobeny. Amin'ny faran'ny andro varotrao.
Rehefa mametraka tanjona kendrena dia alao antoka fa mampiasa ny metodolojika SMART ianao.
Hamarino tsara fa ny tanjona kendrena dia voafaritra, azo refesina, azo tratrarina, azo antenaina ary ara-potoana.
Ohatra, rehefa mametraka ny tanjoko aho dia manontany ireo fanontaniana ireo.
Ohatrinona ny tombom-barotra tiako ho tratrarina ao anatin'ny iray andro - aza adino, ny ahy dia $ 1,000 isan'andro.
Iza amin'ny isan-jaton'ny fiverenana no tadiaviko hahatratrarana ireo valiny ireo?
Zava-misy ve ireo tanjona ireo? Azoko atao ve ny manatratra izany raha tsy mandratra ny kaontiko aho?
Ary farany, firy no mahomby trades mila ho tonga eo?
Vakio indray ny isa 4, firy no mahomby trades tokony horaisina mba hahatratrarana tombom-barotra?
Nahatratra ireo fetra ireo ve ianao?
Toy ny fitsipika ankamantatra aho dia manome antoka fa aorian'ny hahatratrarako ny tanjoko amin'izao andro izao dia miala amin'ny tsena aho. Na inona na inona.
Raha te hianatra ny fomba hisorohana ny fandikan-dalàna ianao dia araho ity lisitra ity.
Manaova drafitra varotra ary araho ity farany.
Aza mifidy varotra tontolo andro
Ferana ny isan'ny trades isan'andro
Makà fotoana fialana aorian'ny fahaverezana lehibe
Mametraha fihenam-bidy ary makà fetran'ny tombony amin'ny anao trades raha mifanakalo amin'ny Olymp Trade Sehatra Forex.
Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny trades napetrako omaly.
Mariho, talohan'ny varotra, ny fifandanjan'ny kaontiko dia $ 33,000 taorian'ny varotra, ny Olymp Trade kaonty mivantana nitombo 35,000 $ ary nijanona teo aho.
Mariho ihany koa fa 4 no nataoko trades, nandresy 3, ary resy 2 nefa mbola nahazo tombony ihany noho ny sandan'ny varotra nandaniako.
Eny, hoy aho.
I trade amin'ny paikady fifanakalozana varotra, toy izany koa ianao.
Ary raha manontany ianao, ahoana no ahitako ny paikady varotra tsara indrindra hampitomboako ny Olymp Trade tantara?
Aza mitady lavitra intsony fa ao amin'ny fantsona Youtube anay, Joon Online.
Mandefa ny paikady varotra tsara indrindra izahay isan-kerinandro. Alao antoka fa hahatratra anao.
Tsy mora ny manao varotra vola. Tsy sarotra koa izany.
Ny sisa hataonao dia ny manaraka ny teny rehetra amin'ity toro-lalana ity mba hahatratraranao.
Raha mety hahaliana anao izany dia midira amin'ny ahy fantsona telegrama raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny varotra, horonan-tsary ary famantarana.
Ahoana no Trade ny paikady Forex Fractal ao Olymp Trade.
Paikady varotra 10 Pullback izay hanampy anao hahazo vola amin'ny 2022.
Banky afovoan'i Kenya Forex Reserve dia mirakitra ny fidinana ambany indrindra hatramin'ny Mey 2020
Tsidiho ny tranokala.
SOKAFY NY kaonty
1000+ Varotra fitaovana
: 0.6 Ny salaniny ho ambany 0.6 pip
: Bonus mitentina $ 5,000
: Voasoratra anarana sy voafehy
Mahazoa tombony ara-barotra $5K.
Midira ao amin'ny vondrona Telegram.